Mana Barumsaa Sadarkaa 2ffaa Amboo - Wikipedia
Mana Barumsaa Sadarkaa 2ffaa Amboo
Barri haaraan Amajjiin1 2015 fi Guyyaan WBO bifa ho’aa ta’ee fi haala baay’ee qindoomina qabuun Oromiyaa guututti Kabajame.
Barri darbe 2014 seenaa Uummata Oromoo keessatti bara hammeenyi Wayyaanee daangaa hin qabne uummata Oromoo irratti raawwate galmee seenaa hin dagatamne galmeessisee fi dhiiga ilmaan Oromoo dhangala'eef gadda ulfaatan dabarsine haa ta'uyyu malee karaa biraa ammoo qabsoon Oromoo golee Oromiyaa cufa irraa finiinee, Oromoon warraaqsa FDG irratti wareegama baasuun warraaqsa FDG karaa nagaan qabsiisee wareegama qaalii kanfaluun gadda sana qalbii Oromoo keessaa haqee Qabsoo Oromoo sadarkaa Idil-Addunyaatti dhageettii horachiise ta’uun ni hubatama. Waggaa haaraa 2015 kana yeroo simannu gochaa diinaa daangaa hin qabne kanatti xumura gochuu fi qabsoo Oromoo hanga bilisummaatti finiinsuun galii isaatiin ga'u dandeenyu ta'uu qaba. Amajjiin tokko Guyyaan WBO fi barri haaraan 2015 Godinaalee Dhihaa Oromiyaa fi Dhaabbilee Barnoota Olaanoo Oromiyaa fi Dargaggoota Qeerroo barattoota Oromoo fi sabboontota uummata Oromoo hedduminaan hirmaachise kun haala baay'ee ho'aa fi dinqisiisaa akkasumas Qindoomina qabuun kabajame. Kabaja guyyaa seena qabeessa kana wanti adda godhu, uummatni Oromoo fi dargaggootni Oromoo dhaamasa gurguddaa waliif dabarsuun Muddee 31/2014 jalbultii irraa eegaluun bifa ho’aa ta’ee fi sagantaa fi karooraa hojii qindeeffachuun tokkummaan walitti dhufuun lafa diinaan marfamee eegamaa jiru Oromiyaa fi dhaabbilee barnoota Olaanoo keessatti bifa qindoomina addaa qabuun kabajame, amma illee itti fufee kabajamaa jira. Dhaabbilee Barnoota Olaanoo godina Oromiyaa garaagaraa irraa haallii kabaja guyyaa WBO fi waggaa haaraa 2015 akka armaan gadii nu qaqqabee jira.
1.	Yuunibarsiitii Jimmaa, Koolleejjii Barsiisota Jimmaa, Magaalaa Jimmaa fi Godina Jimmaa keessatti Qeerroon dargaggootni barattoota Oromoo fi sabboontotni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoof diina fuldura dhaabbachuun gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi mirga hiree murteeffanna finiinsa jiran bifa hedduu midhagaa fi qindoomina qabuun Dungoo diimaa magarisaa diimaa halluu alaabaa ABO qabsiifachuun Guyyaan WBO Amajjiin tokko kabajanii jiru. Haala kanaan goototni sabboontotni Oromoo Qeerroon Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa, Mooraa Yuunibarsiitii Jimmaa Main Campus , Mooraa Saayinsii fi Teechnology, Mooraa Agriculture, Mooraa Business and Economics fi Goototni Barattootni Oromoo Kolleejjii Barsiisotaa jimmaa bifa qindaawaa ta'een walitti dhufuun guyyaa WBO gamtaa guddaan kabajatan. Seenaa Amajjiin Tokko WBO waliin qabuu fi bu’aa ba’ii WBO’n keessa darbee Uummata Oromoo, Oromiyaa fi Qabsoo bilisummaa Oromoo asiin ga’ee irratti barnoota guddaa waliif dabarsuun fulduratti qabsoo bilisummaa Oromoo warraaqsa FDG fi WBO gaachana Uummata Oromoo jabeessuu fi cina dhaabbachuu irratti murtii fudhachuun waadaa isaani haaromsan. Suuraawwan Gootota Waraana Bilisummaa Oromoo Amajjii tokko 2015 jechuun qindaa’ee jiru dinqisiisuun waliif kennuun WBO’n dhaadachuun jaalaalaa fi kabaja guddaa WBOf qabachuu ifatti argisiisan.
2.	Yuunibarsiitii Amboo, Koolleejjii Technica fi Ogummaa Amboo, Manneen Barnoota sadarkaa 2ffaa fi Qophaa’ina Amboo, Mana Barumsaa sadarkaa 2ffaa Liibaan Maccaa Amboo , Manneen barnoota Sadarkaa 1ffaa Amboo fi Uummata Oromoo Magaalaa Amboo, Mana barumsaa Gudar sadarkaa 2ffaa fi Qopha’ina , Sabboontota Oromoo Magaalaa Gudar, Amajjiin tokkoo Guyyaan WBO barra 2015 dungoo diimaa magariisa diimaa qabsiifachuun haalaa ho’aa ta’een kabajatan. Goototni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Amboo guyyaa WBO uummata Magaalaa Amboo waliin walta’uun haala baay’ee nama gammachiisuun guyyaa WBO kabajachuun, seenaa waraana bilisummaa Oromoo wal barsiisuun Qabsoo Bilisummaa Oromoo fiixaan baasuuf warraqsii FDG jabaatee akka itti fufu murtee dabarsan. Goototni barattootni Oromoo haala hordoffii fi humni waraanaa guddaa mootummaan abbaa irree wayyaanee Magaalaa Amboo irra qubsiiseen utuu eegamanii guyyaa WBO bifa hedduu qindaa’aa ta’een uummataan walitti dhufuun kabajachuutti gammachuu guddaan dargaggoota Qeerroo barattoota Oromoo tti dhagaa’amuu qindeessitootni kabaja guyyaa WBO bara haaraawa 2015 ibsan. Hogganootni Qeerroo Godina Lixa Shawaa barruu warraaqsaa fi alaabaa ABO fannisuun nuti qeerroodha jechaa jiru, Qeerroo fi Uummatni Oromoo harka walqabatnee Qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsaa waan jirruuf, waliindha’insii diinaa fi daldalli Siyaasaa dinni Ofuu fashaalaa’ee jiraachuu dhaamsa dabarsan. Keessattuu hogganootni Qeerroo nuti Alaabaa keenyaaf bakka guddaa qabna, Alaabaan ABO alaabaa dhiigaa fi lafee gootota qaalii ilmaan Oromoon ijaarame waan ta’eef alaabaan keenya alaabaa akkasumaan bakka fedhetti fannifamuu, miti, Alaabaa gaafa gootummaa, yeroo Warraqsaa FDG, uummatni keenyaa fi dargaggootni keenya akka dhaadannootti qabatnudha jechuun dhaamsa dabarfatan. Jaarsoliin sirna kabajaa kana irratti argaman utuu WBO biyya keessa nu gidduu jiraatee dhiigni ilmaan keenyaa hin dhangalaafamuu, kanaafuu amma illee uummatni Oromoo WBOn ijaarrachuu qaba, WBO jiraachisuu fi daandii itti argisiisuu qabna, WBO lukkeelee diinaa biyya keessatti fudhatu cina dhaabbachuun WBO jabeessuu qabna jechuun dhaamsa dabarsan.
Haaluma walfakkaatuun Guutummaa Godina Lixa Shawaa aanotaa fi manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa fi Qophaa’inaa keessatti sabboontota ilmaan Oromoo, dargaggoota Qeerroo barattoota Oromoo Aanoota kanneen akka Calliyaa Geedoo, Midaa Qanyii Ballammii, Iluu Galaan Ijaajjii, Xiqur Incinnii, Jalduu, Meettaa Roobii, Adaa’aa Bargaa, Gindabaratii fi Giinciitti haala hedduu jajjabeessa ta’een kabajatan.
3.	Yuunibarsiitii Wallaggaa , Kolleejjii barsiisota Naqemtee, Magaalaa Naqemtee, Manneen Barnootaa sadarkaa 2ffaa fi Qophaa’inaa magaalaa Naqemtee fi Yuunibarsiitii Wallaggaa Damee Gimbii, fi Shaambuutti guyyaan WBO Amajjiin tokko barri haaraan 2015 haala baay’ee ho’aa fi hawwannaa uummataa argateen kabajamuu maddee Qeerroo dhabbilee Barnoota olaanoo yuunibarsiitii wallaggaa gabaasan. Sabboontootni goototni dargaggootni Qeerroon barattootni Oromoo walitti dhufuun dungoo halluu diimaa magariisa Diimaa halluu alaabaa ABO qabsiifachuun mudde 31/2014 irraa eegaluun hanga Amajjii 3/2015tti kabajachaa jiraachuu madden keenya Yuunibarsiitii wallaggaa magaalaa Naqemtee irra gabaasan. Seenaa qabsoon bilisummaa Oromoo keessa darbe irratti barnoota gabaabaa waliif kennuun kabajatan, adeemsa warraqsaa FDG jabeessuu fi fincila waliigalaa itti fufiinsan gaggeessuuf marii bal’aa godhachuun barrii bara olola Filannoo utuu hin ta’ii bara warraaqsaati, bara falmaan guddaa fi milkii guddaan itti nu eeggatu waan ta’eef ilmaan Oromoo bakka jirruu hundaa yeroon FDG finiinsinuu amma jechuun dhaamsa dabarsan. Goototni Qeerroon barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Wallaggaa yeroo guyyaa kana kabajatanitti Gootota qeerroo Yuunibarsiitii Jimmaa fi amboo waliin walitti fufeenya cimaa fi wal hubannoo guddaa waliif dabarsuun ibsame jira.
4.	Yuunibarsiitii Mattuu, Asoosaa, koolleejjii barsiisota Mattuu, fi Gootota Oromoo magaalaa Mattuu,fi Baddalleen dhaamsa guddaa waliif dabarsuun Goototni Qeerroon barattootni Oromoo walitti dhufuun dungoo diimaa magariisa diimaa halluu alaabaa ABO argisiisuu qabsiisuun bifa qindaa’een guyyaan WBO kabajatan. Bakka bu’ootni Qeerroo barattoota Oromoo Yuunibarsiitii Mattuu haala yeroo raafama siyaasaa biyyattiin keessa jirtu irratti illee marii baldha gochuun sochiin warraqsaa FDG uummata Oromoof murteessaa ta’uu fi dhaamsa Oromoon carraa guddaa bara haarawaa kanatti qabu irratti jabaachuun waanjoo garbummaa of irraa buusuuf gamtaan haarka wal qabatnee haa kanuu, WBO’n bakka jiruu hundaa jabaachuu qaba, uummatni Oromoo WBO ijaaruu jabeessuu irratti xiyyeeffannoo addaa akka godhu waamicha dabarsan.
5.	Yuunibarsiitii Walisoo fi Walqixeetti Goototni barattootni Oromoo utuu diinaan waldhaansoo qabaa jirani Amajjii tokko guyyaa WBO kan bara 2015 bifa adda ta’een kabajatan. Haaluma walfakkatuun ijoolleen Oromoo Amajjii tokko guyyaa WBO dungoo halluu alaabaa ABO qabu qabsiisuun barnoota dhaabuun guyyaa kanaaf jaalaalaa fi kabaja guddaa qabachuu mul’isan. Keessattuu goototni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Walqixxee diinaan waldhaansoo qabaa utuu jirani guyyaa WBO bifa ho’aa ta’een kabajachuun jaalaalaa fi kabaja guddaa WBOf qaban mul’isan. Waalumaa Galattii Amajjiin 1/2015 Guyyaan WBO kan yeroo kamii iyyuu caalaa biyya keessatti bifa qindaa’ee fi hoggansaa fi qajeelfama qabuun kabajame jira. Haala walfakkaatuun Muddee 31/2014 jalbultii irraa eegaluun hanga Amajjii 3/2015tti haala baay’ee qindaa’aa ta’ee fi itti fufinsa qabuun kabajamee jira. Suuraa waraanaa Bilisummaa Oromoo, Kaaseetta Wallee Qabsoo bilisummaa Oromoo fi dhaamsa Baga Amajjii tokko Guyyaa WBO geessan jechuun jaalli jaala isaaf, jalalleen jaalallee isheef, hiriiyoonnii fi uummatni ergaa karaa Moobiyilaan waliif daddabarsaa jiraachuun ibsamee jira.
Hooggansii qeerroo Bilisummaa Oromoos akkuma jalbultii Amajjii tokko bara haaraa Guyyaa WBO ilaalchisuun ibsa dabarsuun guyyaan WBO bifa adda ta’een akka kabajamuuf qajeelfama dabarseen uummatni fi dargaggootni Oromoo Qajeelfama Qeerroon dabarsee hojitti hiikuun guyyaa WBO bara kana bifa addaan kabajuu hoggansii qeerroo Bilisummaa Oromoo hedduu kan dinqisiifatuu fi Uummatichi dhugaatti Qeerroo waliin hiriiree jiraachuu mirkaneeffachuun Uummata isaa qabatee qabsoo Warraqsaa FDG akka Waliigalatti (National Revolution) Mootummaa wayyaanee angoo irraa fuudhe darbuu qindeessa jiraachuu beeksise!!.
Barri kan Milkii Fi Injifannoo U/ Oromoo Hundaaf!!
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Mana_Barumsaa_Sadarkaa_2ffaa_Amboo&oldid=33635" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 4 Muddee 2020, sa'aa 21:15 irratti.